Fanamelohana mpanao gazety: Hampakatra ny raharaha amin’ny Fitsarana ambony ireo voaheloka
Lamandy 10 tapitrisa Ariary no sazy navoakan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ho an’i Nadia Raonimanalina, talen’ny famoahana ny gazety Le Quotidien. Lamandy 10 tapitrisa Ariary ihany koa no sazin’i Mahery Rabearivony, mpanao gazetin’ny 24h Mada. Nafahan’ny Fitsarana i Arphine Helisoa (CUA Serasera) sy ny Patrick Ramihone Andriamisa, Talen’ny kolontsaina eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Notorian’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika Malagasy ho namoaka vaovao tsy marina, manohitohina ny Tafika Malagasy izy ireo, taorian’ny fisidinan’ny helikôteran’ny Tafika Malagasy tao amin’ny kianjan’i Mahamasina ny zoma 30 aogositra 2019. Nivoaka ny tolakandron’ny alakamisy 19 septrambra 2019 ny didim-pitsarana.
« Mampieritreritra ity tranga iray ity satria hitakona tsikelikely ny orinasan-tserasera ary ho very asa ny mpanao gazety raha izao no mitohy », hoy Rakotonirina Gérard, filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara taorian’ny nivoahan’ny didim-pitsarana.
Hanao fampakarana ny raharaha amin’ny Fitsarana ambony ireo voaheloka. Hametraka ny antotan-taratasin’ady mikasika izany eny amin’ny Fitsarana ambaratonga ambony Antananarivo ny mpisolovava azy ireo anio zoma 20 septambra 2019, misandratr’andro.
Ora vitsy taorian’ny nivoahan’ny didy dia namoaka fanambarana mikasika ny mpanao gazetin’ny « Le Quotidien » ny ministeran’ny serasera sy kolontsaina.